Werewolf: Iyo Apocalypse - Mwoyo wesango mutambo wevhidhiyo weLinux | Linux Vakapindwa muropa
Werewolf: Iyo Apocalypse - Mwoyo wesango
Nhau dzakasiyana uye Walkabout dzakasimbisa kuti zita remutambo wevhidhiyo Werewolf: Iyo Apocalypse - Mwoyo weSango Ichavhura mukota yechina (Q4) ye2020 nekupfupisa kwekuzove ichave. Mutambo wevhidhiyo kubva kuvakagadziri veWanderlust: Nhau dzekufamba uye Iyo Witcher 1, saka zvinhu zvinonakidza zvinotarisirwa kubva kwazviri ...
Werewolf: Iyo Apocalypse - Mwoyo weSango ndeye nhoroondo inonakidza mutambo zvichibva pane inozivikanwa mutambo-wekutamba mutambo Werewolf: Iyo Apocalypse. Hunhu hwako ndiMaia, mukadzi wechidiki uyo anotsvaga kutsvaga nyaya iri kumashure kwemhuri yake, uye panguva iyo yaachasangana nezvakawanda zvakavanzika kubva munguva yakapfuura, pamwe nezviitiko uye njodzi musango reBiałowieża (imwe yemasango ekutanga eEurope. Nengano zhinji nengano).
Pamusoro peiyi Trailer ine avante, iwe unogona zvakare kuwana zvimwe zvakawanda pane peji re chiutsi yakatsaurirwa kwaari.
Asi ini ndave kutofungidzira kuti ma mechanics emutambo uyu akavakirwa pa 3 zviwanikwa zvikuru: Enda ku. kuda uye hunhu. Ivo vanozotarisa sarudzo dzaMaia uye kufurira zviitiko. Iko kusanganiswa kwekunakidzwa, basa uye inoonekwa inova inoita kunge inonakidza. RPG inosanganisa tsika uye nhau dzinonakidza kwazvo ...
Uye kana iwe uri kushamisika kuti zvese izvi zvine chekuita neLinux kana nemisoro yakafukidzwa muLxA, sezvaungave wafungidzira, zvinoita zvakare kuti ichave iri paLinux. Vagadziri vayo vakaita kugunun'una kudiki kune ino inoshanda system kuratidza kwavo vavariro. Mukuburitswa kwavo mumapepanhau, Walkabout uye Dzakasiyana Ngano vanoti vari kuenderera mberi nerutsigiro rwavo kuLinux, iri inhau huru. Kunyangwe zvichingoitika kazhinji nemamwe mazita, zvingangoita kuti iyo Linux vhezheni ichasvika chinguva chidiki uye haizowirirana nekutanga kuvhurwa kwepuratifomu iyo ikozvino ine korona munyika yekutamba.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Linux Mitambo » Werewolf: Iyo Apocalypse - Mwoyo wesango
Ndatenda neruzivo. asi ndingadai ndakatonyanya kufara kana ivo vakataura nezveWhite Wolf kuitira kuti vaverengi veLxA vazive zvishoma nezve franchise iyo mutambo wevhidhiyo uyu wakafemerwa kuti ubude, nekuti, sevamwe vazhinji ndakave nekusaziva zvachose nezve kuvapo kweizvi mitambo yekutamba-kutamba kusvika 2012 pazvakazoitika kwandiri kuti nditambe VTMB paPC yangu, ndichitsvaga chimwe chinhu chingaite kuti ndirangarire Soul Reaver paPS, uye mukomana anga asiri iwo akasiyana zvachose asi kushamisika kwakazara kuti yaive ...
MaARM-based PCs: Sei kana x86-based yatovepo?
System76 iri kuisa CoreBoot kodhi kune AMD Ryzen mapuratifomu